Mpanamboatra tavoahangy PET - Orinasa mpamatsy tavoahangy China China
Tavoahangy plastika tsy misy
Ny tavoahangy plastika poakaty tsy misy fangarony dia azo ekena tanteraka, maivana ary kilasy sakafo ankatoavina. PET dia plastika iray izay manana endrika toy ny fitaratra, izay tonga lafatra amin'ny fanatsarana vokatra marobe. Ny tarehin'ny vera mazava dia ahafahan'ny mpanjifanao mahita ny atiny - noho izany dia tsara ho an'ny famonosana ranon-javatra na menaka manitra manintona.
Misaotra ny lanjany maivana indrindra Tavoahangy plastika tsy misy famolavolana, io no fonosana lafo indrindra sy maharitra misy eo amin'ny tsena. Ity vahaolana mpisava lalana ity dia miompana amin'ny tsenan-drano mbola misy tavoahangy PET bitika kely, indrindra ireo mpamokatra mitady hanatsara ny vidin'ny fonosana sy ny famokarana.
NY Tavoahangy plastika tsy misy dia azo vidiana amin'ny safidy fanidiana lehibe. Anisan'izany ny karazana plastika na satroka aluminium rehetra misy na tsy misy valiny.
Shanghai COPAK dia mpamatsy matihanina amin'ny fonosana sakafo toy ny Tavoahangy PET misy sakafo, kaopy PET ambaratonga sakafo, kaontenera PET misy sakafo sy vokatra PLA. Any Shanghai, tanàna ara-toekarena any Sina, no anananay ny hevitra lamaody indrindraTavoahangy PET misy sakafo. Seranan-tsambo fitaterana mora, ary ny tsipika famokarana mandroso indrindra.
Ny mpanjifa mahazatra an'i Shina dia mety mahalala fa, Shanghai dia manana fenitra henjana indrindra amin'ny famokarana fonosana sakafo. Orinasa avy any Shanghai aotavoahangin-tsakafo saha dia tokony ho ny tsara indrindra. Manomboka amin'ny fisafidianana fitaovana ka hatramin'ny famokarana sy ny fonosana dia vita amin'ny atrikasa tsy misy vovoka ny dingana rehetra. Nanao satroka sy fonon-tanana ny mpiasanay rehetra rehefa nanamboatra milina izy ireo. Ny tsipika famokarana mandeha ho azy ho an'nyTavoahangy PET misy sakafo ary ataovy afaka ny tanana. Ity dia azo antoka fa ny mpiasa dia manana kely vintana hifandray amin'ny vokatra. Tsy mila miahiahy momba ny kalitao ianao. Ary amin'ny fotoana iray ihany dia manana antoka izahay aorian'ny fivarotana mba hiantohana ny zonao.
Tavoahangy plastika misy sakafo
Rehefa mitady sy mamorona Tavoahangy plastika misy sakafo, zava-dehibe ny mahatakatra raha toa ny plastika iray heverina ho azo antoka ara-tsakafo na tsia. Governemanta maro no mamorona lalàna mifehy ny plastika misy ny sakafo. Any Canada, Health Canada dia manara-maso ireo fitsipika ireo. Any Etazonia dia mamorona ny lalàna mifehy ny sakafo sy ny zava-mahadomelina (FDA). na izany aza, manana ny takiana mitovy amin'izany izy ireo. Ny plastika misy ny sakafo dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fenitry ny fahadiovana. Tsy mety misy loko, additives hafa na vokatra plastika voaverina noheverina fa manimba ny olombelona. Ny plastika misy ny sakafo dia mety misy ambaratonga fitaovana fanodinana raha mbola mifanaraka amin'ireo torolàlana sy fitsipika fariparitan'ny maso ivoho mpanara-maso ireo fitaovana ireo.
Tavoahangy frantsay toradroa
NY Tavoahangy frantsay mazava dia fitambarana hatsarana sy fiasa tsara. Ny endrik'izy ireo mitahiry habakabaka toradroa dia ankafizin'izy ireo satria tsy vitan'ny hoe mampitombo ny habaka fitehirizana fa koa ny fahitana ny atiny sy ny marika iray. Ny vatan'ny kianja dia mamela ireo tavoahangy ireo hahomby amin'ny habaka amin'ny fandefasana sy ny fitehirizana.
Tavoahangy PET French Square manana endrika miavaka mahitsizoro, ampiasaina amin'ny vokatra sakafo sy zava-manitra tavoahangy hafa. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny asan'ny ronono, fa mety ho tena ilaina koa amin'ny fitehirizana ranon-javatra hafa toy ny concentrates, syrups ary saosy ary ho an'ny solida toa ny DIY mixs, rubs ary ny zava-manitra. Izy ireo dia hanao fonosana tena tsara ho an'ny fanomezana koa.
tavoahangy plastika frantsay
ny FRANTSAY splastika quare bottle avy amin'ny COPAK dia fomba mahafinaritra hanehoana ny ranonao, ny malama, ny voasarimakirana, ny kafe mangatsiaka, ary ny zava-pisotro mamelombelona hafa! Ny kianja frantsay dia manondro tavoahangy misy vatan'ny toradroa sy soroka mizana. Ireo fahasamihafana ireo dia samy hafa amin'ny haavony, ny volavolany, ny sakany ary ny endriny.
OEM dia mijoro amin'ny famokarana fitaovana tany am-boalohany ary ny ODM dia mijoro ho an'ny Original Design Manufacturing. Ity dia voatondro ary amaritan'ny orinasa iray hafa amidy. Ny orinasa toy izany dia mamela ny orinasan'ny marika hamokatra nefa tsy mila miditra amin'ny fandaminana na ny fitantanana orinasa. Ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny fonosana sakafo, kosmetika, fikarakarana manokana, fanafody ary maro hafa.
Mpanamboatra matihanina amin'ny tavoahangy PET sy kaopy ho an'ny fonosana sakafo izahay. Ny tavoahangy PET sy ny kaopy dia azo asiana zava-pisotro sy ranom-boankazo. Kafe mangatsiaka, gilasy, ranomandry, ronono, ronono, makia ary zava-pisotro hafa koa azo amboarina. Ampiasaina amin'ny bara, fivarotana sakafo haingana, fivarotana malama sns sns. Ary nahomby izahay niara-niasa tamin'nyTavoahangy OEM / ODM PET misy rojo na fivarotana malaza maro toa ny STARBUCKS, KFC, BLUEFROG, MC sns.
Ny polyethylene terephthalate, na PET, dia fitambarana ampiasaina amin'ny dingan-javatra fanaovana karazana tavoahangy plastika. Zava-dehibe tokoa ny manamarika fa ny tavoahangy zava-pisotro PET dia tsy mitovy amin'ny BPA (bishenol-A).
Tavoahangy zava-pisotro PET manolora famaranana mazava, tsy misy mikorisa ary maharitra miaraka amina fanoherana avo sy fanoherana avo lenta. Ny plastika polyethylene terephthalate dia matetika ampiasaina amin'ny tavoahangy sakafo sy zava-pisotro satria somary henjana sy mavesatra maivana. Ny tavoahangy PET mazava dia hampiseho miharihary ny vokatrao,
Raha eo amin'ny sehatry ny zava-pisotro na ranom-boankazo ianao, Tavoahangy fisotro PET ao Shina no safidinao voalohany. Ary eo amin'ireo mpamatsy ny tavoahangy misy alikaola PET ao Shina, COPAK no azonao itokisana.
Shanghai COPAK Industry Co., LTD. Fanafohezana "COPAK".
COPAK dia mpanamboatra matihanina ho an'ny kapoaka PET AND Tavoahangy zava-pisotro PET any Sina. Efa an-taonany maro no niasa tamin'ity sehatra ity dia manan-karena isikah miaina ahon mamokatra fonosana kilasy sakafo. Manana atrikasa tsy misy vovoka ho an'ny kaopy sy tavoahangy izahay.
Kapoaka zava-pisotro PET
Amin'ny maha mpanamboatra tavoahangy plastika azo itokisana azy, COPAK dia manao izay farany vitantsika mba hahatanteraka ny fangatahana avy amin'ny mpanjifanay.
Manolotra kalitao avo lenta izahay Kapoaka zava-pisotro PET izay vita amin'ny fitaovana matanjaka mba hiantohana ny fahafaham-po amin'ny mpanjifanay
COPAK'S Kapoaka zava-pisotro PET dia vita amin'ny tavoahangy fitaovana PET sy ny rakotra Aluminium Easy Open; ny volume dia avy amin'ny 6oz-20oz.
Sady mangarahara no vita pirinty na sticker SABOTSY INDRINDRA NY PET misy. Izahay dia manana ekipa mpamorona eo an-tampon'ny lamaody ho an'ny nofidinao. Ny famokarana manokana dia tohanana ihany koa.
Zava-pisotro PET fitoeran maivana, tsy vaky ary, noho ireo tombony azo, be mpampiasa be.
Ny kaontenera PET an'ny COPAK dia natao indrindra ho an'ny zava-pisotro toy ny rano fisotro tsotra, ronono, kafe, dite, Smoothie, ranom-boankazo ary zava-pisotro malefaka. Samy manana kaontenera zava-pisotro PET mazava sy fitoeran-tsotro PET vita pirinty. SABOTSY PET BOTTLES, tavoahangy PET Square, tavoahangy bera, CAN CAN, PET POP CANS, PET PET Boston sns.
COPAK'S rehetra Zava-pisotro PET fitoeran amboarina amin'ny atrikasa maimaim-poana amin'ny vovoka ary mifanaraka amin'ny fenitry ny kilasy sakafo iraisam-pirenena. Mpamokatra azo itokisana izahay ary manana rafitra serivisy aftersales tonga lafatra. Ho voavaha ny fitarainanao rehetra.
The PET tavoahangy safidy tsara ho an'ny detergents, akora simika ao an-trano, menaka manosotra, toiletries, vokatra ara-pahasalamana sy hatsarana, confectionery, menaka / saosy azo hanina ary maro hafa. Ary afaka mamela ny hatsaran'ny vokatrao hiseho amin'ny alàlan'ny.
Ny tavoahangy plastika PET misy kalitao avo sy avo lenta dia azo averina fenoina, maivana ary naoty sakafo nankatoavina. PET dia plastika iray izay manana endrika toy ny fitaratra, izay tonga lafatra amin'ny fanatsarana vokatra marobe. Ny tarehin'ny vera mazava dia ahafahan'ny mpanjifanao mahita ny atiny - noho izany dia tsara ho an'ny famonosana ranon-javatra na menaka manitra manintona.
Araka ny Mpanamboatra tavoahangy PET any Sina, ny fizotry ny famokarana anay rehetra dia mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny sakafo any Sina. Ary izahay koa dia voamarina amin'ny ISO 9001: 2015 Quality Management System, FDA amin'ny fanondranana any Etazonia. Ary nandany ny Certification System momba ny fiarovana ny sakafo mba hanohizana ny fitakiana tsena sy ny fironana momba ny vahaolana fonosana kalitao tsara kokoa novokarina teo ambanin'ny tontolo madio.